हाम्रो बारे - टियांजिन Shengxin खेल सामान कं, लिमिटेड
टियांजिन Shengxin खेल सामान कं, लिमिटेड 2011, उपकरणहरू बास्केटबल अडान डिजाइन र खेल स्थलहरू निर्माण र निर्माण आउटडोर फिटनेस उपकरण, पिंजरे फुटबल मैदान, बहु-उद्देश्य खेल मैदान, Schoolyard खेल उपकरण, सिकाउन विशेष छ जो, भलिबल मा स्थापित भएको थियो पोस्ट, ब्याडमिन्टन पोस्ट, टेनिस पोस्ट, बाहिरी सुरक्षा जाल र अलग बेल्ट। हामी पनि 'ग्राहकहरु को अनुरोध रूपमा गैर-मानक उपकरण को सबै प्रकार को निर्माण गर्न सक्छन्। अब Shengxin चीन स्पोर्ट संघ (CSGF), चीन स्टेशनरी र स्पोर्ट संघ (CSSGA), चीन शैक्षिक उपकरण उद्योग संघ (CEEIA), टियांजिन स्पोर्ट उद्योग संघ (TSIA) को सदस्यता, र पनि विद्यालय स्पोर्ट निर्देशक एकाइ छ TSIA मा CEEIA मा उपकरण शाखा संघ र स्पोर्ट उपकरण व्यावसायिक समिति। सामान्य प्रबन्धक जांग Junyuan TSIA को स्थितिमा निर्देशक रूपमा चयन गरिएको छैन।
विकास7वर्ष पछि, Shengxin खेल चिनियाँ फिटनेस उपकरण उद्योग मा प्रभावशाली कम्पनी भएको छ। अब, हाम्रो क्षमता र कारखाना क्षेत्र चीन मा पहिलो स्थिति छैन। उत्पादन उपकरण स्वचालन उद्योग मा अग्रणी स्तर छ। अब हामी शीर्ष 10 कम्पनीहरु NSCC प्रमाणपत्र र टियांजिन मा अग्रणी स्तर मा प्राप्त जो एक हो। वर्तमान मा, हाम्रो NSCC उत्पादनहरु 40 भन्दा बढी NSCC प्रमाणपत्र कम्पनीहरु मा अपस्ट्रिम स्तर मा छ जो 100 भन्दा प्रकार छन्
को खेल सामान उद्योग को तीव्र विकास Shengxin खेल लागि मौका आपूर्ति। 2017 मा हाम्रो बिक्री आय 100 लाख भन्दा बढी RMB छ। हाम्रो कम्पनी, उद्योग लेआउट बढाउने उत्पादनहरु विस्तार श्रृंखला र पर्याप्त 2018-2020 मा बिक्री आय वृद्धि योजना बनाए।
हामी 2018 मा पूरा गरेको छ:
1.स्तर अप उत्पादन लाइन, उत्पादन क्षेत्र 20,000 वर्ग मीटर। क्षमता 1,80,000 टुक्रा, उत्पादन मूल्य 180 करोड RMB पुग्न सक्दैन।
2.नयाँ निर्माण इन्डोर फिटनेस उपकरण उत्पादन बोट पहिलो वर्षमा 60 लाख उत्पादन मूल्य पुग्न सक्दैन।
3. नयाँ श्रृंखला इनडोर र आउटडोर फिटनेस उत्पादन, जो एकदम डिजाइन, विनिर्माण र innovating को कम्पनीको क्षमता बलियो विकास लागि उन्नत ताइवान आरडी टोलीसँग सहयोग गर्न इन्भेस्टमेंट्स3लाख RMB हरेक वर्ष।
4.Built 20 भन्दा बढी व्यक्ति पछि-बिक्री सेवा टीम distributers को चिन्ता मुक्त गरौं र ग्राहकहरु आश्वासन बाँकी।
5पूर्ण-स्वचालित छ-अक्ष वेल्डिंग रोबोट .Introduced जो मरेको कोण र स्वचालित परिवर्तन नगरी 360 डिग्री वेल्डिंग महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। स्वचालन 100% पुग्न सक्दैन। हामी पनि जस्तै उन्नत उपकरण शुरू अद्वितीय पारित छिडकाव डबल-रेल र चित्रकला प्रवाह रेखा, संख्यात्मक नियन्त्रण पाइप काटन मिसिन, संख्यात्मक नियन्त्रण पाइप त्यसैले मिसिन झुकयो र स्वचालित। यी सबै उन्नत उपकरण स्पष्ट उत्पादन गुणवत्ता र उत्पादन दक्षता सुधार र उत्पादन लागत कम।
अब हाम्रो कुल लगानीको 125 लाख RMB छ (पृथ्वी र भवन कार्यशाला समावेश)। तय इनपुट 60 लाख RMB छ, हालको राजधानी 65 लाख RMB छ।
निम्न वर्ष मा, पहिले हामी अनुसन्धान वा शुरू मार्फत बौद्धिक उत्पादन विकास गर्न चाहन्छौं। मात्र होइन थोक खरिद बजार कब्जा, तर पनि सामान्य ग्राहकहरु रोचक प्राप्त र सामान्य परिवार मा जानुहोस्। दोश्रो, हामी विस्तार र गहिरो राष्ट्रिय फिटनेस नीति को बोनस शेयर गर्न साझा अर्थव्यवस्था मा सामेल गर्न चाहन्छु। इन्टरनेट, क्लाउड कम्प्युटिङ, ठूलो डाटा, कुरा र सँगै विकास राष्ट्रिय फिटनेस को इन्टरनेट धक्का आशा, प्रविधिलाई राष्ट्रिय फिटनेस सहयोग गरौं।
हाम्रो तीन वर्ष योजना bellows रूपमा छ:
2018, बिक्री आय 180 लाख RMB, लाभ 30 लाख RMB;
2019, बिक्री आय 300 लाख RMB, लाभ 50 लाख RMB;
2020, बिक्री आय 500 लाख RMB, लाभ 100 लाख RMB।
हामी अग्रणी स्तर मा लक्ष्य प्राप्त गर्न पछि हुनेछ!
सेप्टेम्बर 2017 मा, Shengxin खेल नयाँ Shengxin खेल सँगै भवन, 12 वर्ष भन्दा बढी "शीर्ष 500 चिनियाँ उद्यम" को छ जो टियांजिन Youfa स्टील पाइप समूह, साथ। सहयोग कम्पनी नयाँ कारखाना निर्माण, नयाँ उपकरण परिचय र नयाँ उत्पादनहरु विकास सुधार गर्छ।